Madaxweyne Biixi oo Shacabka Hargeysa La Tukaday Salaad Roob-doon ah, Baaqna u jeediyey | Aftahan News
Madaxweyne Biixi oo Shacabka Hargeysa La Tukaday Salaad Roob-doon ah, Baaqna u jeediyey
Hargeysa(aftahannews):- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa kala qayb-galay salaad Roob-doon ah oo Axaddii maanta laga oogay dhammaanba dalka.
MADAXWEYNAHA OO SHACABKA ROOB-DOON LA TUKADAY
War qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada, ayaa lagu faahfaahiyey khudbad uu madaxweynuhu jeediyey salaadda roob-doonta ah ka dib, taasoo uu bulshada Somaliland ugu baaqay inay isa saamaxaan oo Illaahay baryaan, isla markaana gacmaha is-qabsadaan oo danta guud ka wada shaqeeyaan.
Warkaas oo faahfaahsan qoraalkiisa oo nuqul ka mid ahi soo gaadhay aftahannews.com, waxa uu u dhignaa sidatan:- “Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa salaadda roob-doonta kala qayb-galay boqolaal shacab ah oo ku tukaday Masjid-jaamaca magaalada Hargeysa, waxana uu shacabka kula dardaarmay inay isku tashadaan, awoodda Eebbena ku kalsoonaadaan, ducadana badsadaan.
Ugu dambayntii waxa uu bulshada Somaliland Eebbe uga baryey inuu abaaraha kasoo furto, cirkana madar Khayr qayba ka siiyo, isaga oo shacabkana ugu baaqay inay quluubtooda nadiifiyaan oo ay daacad isu noqdaan.” sidaa ayaa lagu yidhi warka madaxtooyada naga soo gaadhay.